ဒီတစ်နှစ်သင်္ကြန်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ် ဆံပင်၊ မိတ်ကပ် စတိုင်လ်လေးတွေနဲ့ လန်းကြစို့... 1. မျက်နှာကို သန့်စင်ထားပါတယ်။ 2. Foundation 3. Concealer ကတော့ မဖြစ်မနေသုံးပါ။ 4. မျက်လုံးကိုလည်း Concealer သုံးပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ 5. ပါးရိုး နည်းနည်းချမယ်။ 6. နှာတံလေးကိုလည်း နည်းနည်းဖော်မယ်။ 7. ပါးနီဆိုးမယ်။ 8....
ဒီတစ်လအတွက်ကိုတော့ မန်းမြေမှ ရတနာများ ရှိရာဆီ ခြေဆန့်ခဲ့ပါတယ်။ စိန်စပ္ပာယ်ဖူးရဲ့ တန်ဖိုးမြင့်အဆင်တန်ဆာများနဲ့ မန်းမြေမှ အနုပညာရှင်လေးများရဲ့ Jewellery စာမျက်နှာများ ဖြစ်ပါတယ်။ Thun Wati Aung Min Thu Wint July Nyein Designer - Zay Zay (Mdy) Photo - Tony
ဆံပင် ပုံစံအဆန်းလေးတွေကို ဖန်းတီးရတာ ကြိုက်တယ် ဆုသဒါစံ အခုပြင်ထားတဲ့ ပုံစံလေးက ဆံပင်ကို ချမထားချင်ပဲ လုံးဝ ကျစ်ဆံမြီးဆံထုံးကိုမှ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံဖြစ်နေအောင် အလက်အလက်ကလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး Style လုပ်ထားတာပါ… ဆံထုံးကြီးပဲဆို ရိုးနေမှာလေ… ခပ်ဆန်းဆန်းလေးကျစ်ပြီး ထုံးထားတာပေါ့... ပြီးတော့ Make up ကိုလည်း...
ကလေးတစ်ယောက်လို ရိုးရှင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်စရာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတွေရဲ့ Make up ကလေးလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူရာလေးတွေ အားလုံးပေါင်းပြီး… ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါ… ချစ်စရာကောင်းပြီး ချစ်စဖွယ် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီလေ Model - Shwe Ye Thone Thone...
MIZON INTENSIVE SKIN BARRIER CREAM DEEP MOISTURE LIFTING CARE CREAM ကတော့ Ceramide ပါဝင်မှုကြောင့် အစိုဓာတ်ကို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းထားနိုင်ကာ… အသားအရည်ကို ပိုမိုစိုပြည်တင်းရင်းစေပြီး နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Mild Formula ကြောင့် Skin ကို လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိပဲ Double Moisturizing Layering ပါ...